अनशनरत डा. केसीकाे अवस्था एकदमै नाजुक, पुर्लुक्क हेर्छन्, बोल्नै सक्दैनन्… – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > अनशनरत डा. केसीकाे अवस्था एकदमै नाजुक, पुर्लुक्क हेर्छन्, बोल्नै सक्दैनन्…
admin January 29, 2019 Uncategorized	0
काठमाडौं १५ माघ । उनी आँखा चिम्लेर पल्टिरहन्छन्। कोही भेट्न आउँदा पुलुक्क हेर्छन्। गल्दै गएपछि फेरि आँखा बन्द गर्छन् । आगन्तुकहरु हेरेरै फर्किन्छन्। २० दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मुटुमा समस्या बढ्दै गएको छ। उनको दुई पटक एन्जियोग्राम गरिसकिएको छ। उको शरीर कमजोर बन्दै गएको छ। बोलीसमेत निस्किँदैन। मुस्किलले साउती गर्छन्। परेला पाट्टिएका छन्। तर, ६३ वर्षीय केसीले औषधी खान मानेका छैनन्।
साँफेबगरबाट आयो दुःखद बस दुर्घटनाकाे खबर
शिल्पा छवि झगडा गर्नुभन्दा अघिल्लो रात यस्तो सम्म भएको रहेछ, खुल्यो अर्को नँया रहस्य (भिडियो)
लकडाउनमा कर, राजश्व तुरुन्तै बुझाउन जनतालाई सर्वोच्च अदालतको आदेश, नबुझाएमा यस्तो कारवाही हुने (आदेश हेर्नुहोस्)
अमेरिकामा म’स्ति’क घा’त कारण एक नेपालीको मृ’त्यु ! #हार्दिक_श्रद्धाञ्जली!!
देशभरी पारेको बाढी र पहिरोको वितण्डा :मेलम्चीमा ७ जना वेपत्ता, मादीमा हाइड्रो पावर बगायो, अरु के के भए ?